Ho avy amin’ny heriny ny Tompo | FJKM Ambonin'Ampamarinana
Ireo matoandahatsoratra rehetra
Ho avy amin’ny heriny ny Tompo
Amin’ny fifaliana ry havana no hamangiana antsika mpianakavin’ny finoana rehetra mahatratra izao volana faha iraika ambin’ny folo amin’ny taona 2019 izao.
« Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fampindrampo ary ny fiadanana avy amin’andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy, Zanaky ny Ray, amin’ny fahamarinana sy ny fitiavana. » (II Jao. And. 3)
Madiva hifarana ny taona 2019, tsy mampandini-tena ana ove izany ? Firy andro sisa dia hivalona ity taona ity ? Andro firy no nandalo teo anatrehanao ? Lanjao hoe manao ahoana ny fiainanao teo anatrehana ? Manoloana izany rehetra izany no anambarana aminao fa « ho avy amin’ny heriny ny Tompo». Lohahevitra omena antsika amin’ity volana Novambra ity izany. Lohahevitra itarihana anao handini-tena eo anatrehan’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Mpitsara Marina (Heb. 12 : 23). Aiza ho aiza ianao, « aiza moa ianao » (Gen. 3 : 9).
Ny Tompo no manontany anao, mbola miala nenina aminao satria tia antsika Izy.. Izy izay milaza fa « fitiavana mandrakizay no itiavako anao » (Jer. 31 : 3) ary milaza fa « tia anareo » (Mal. 1 : 2)
Ho avy Izy amin’ny heriny sy ny fahefany, vonona hitsena Azy ve ianao ? Fa izay mino ny Zanaka dia efa manana izany fahavononana izany ka tsy menatra hiseho eo anatrehany na dia mpanota aza satria efa nohamarinina tao amin’ny Zanaka (Rom. 5 : 1, 9). Efa voamarin’i Jesoa ve ianao sa manamarin-tena ? fa ao amin’i Jesoa, tsy misy fanamelohana intsony (Rom. 8 : 1).
Koa meteza ho ao Aminy fa izany no nahatongavany (Jao. 3 : 16). Izay mino Azy dia tsy ho very mandrakizay. Ary ao Aminy ny « Eny » sy ny « Amena. » (II Kor. 1 : 20). Aza mangataka andro, fa fotoana izao hiverenana Aminy, aza misalasala fa maneke tsotra izao mba ho vonona hitsena Azy isika mianakavy fa tsy maintsy ho avy Izy amin’ny Heriny.
Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Mahereza ry havana.